विदेशबाट दसैँमा पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहोस् यी कुरा !! | सुदुरपश्चिम खबर
विदेशबाट दसैँमा पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहोस् यी कुरा !!
तपाईँले विदेशबाट वैधानिक हिसाबले रकम देशमा पटाउँदा देशलाई पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सहयोग पु¥याइरहनुभएको हुन्छ । तपाईँले पठाएको रकमको गलत प्रयोग पनि हुँदैन ।
मेहनत गरेर कमाएको रकमको अरूले फाइदा उठाउन पाउँदैन । तपाईँको आम्दानीको स्रोत पनि खुल्छ र सहज रूपमा तपाईँको आफन्तको हातमा पुग्छ । भविष्यमा झमेलामा पर्ने सम्भावना पनि हुँदैन । उज्यालो अनलाइन बाट सभार